Somali News • Page 1098 • Horseed Media
Puntland iyo Galmudug oo ka wadahadlay heshiisyadii Gaalkacyo (Dhageyso)
January 17, 2010 - By: Abdirahman. A
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa maanta waxaa ka dhacay kulan laba geesood ah oo ay isugu yimaadeen Dowlada Puntland iyo maamulka cusub ee Galmudug loo dhisay, kulankan oo looga »
Tagged With: Gaalkacyo, Galmudug
Dadki ka Barakacay Beledweyne oo Xaalad nolol xumo haysata.
Dadki ka barakacay dagaalada ka socday magaaladda Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramaaya in ay lasoo darseen xaaladdo nolol xumo ah. Dadkaas oo intooda badan uu Barakaceen »
Tagged With: Beledweyne
Ciidamada AMISOM iyo Askar ka tirsan Dawladda oo Is-rasaaseeyay
Ciidmada AMISOM ee ilaalada ka haya Garoonka Diyaaradaha ee Aden Cadde iyo askar katirsan Dawladda Federaalka ayaa is rasaaseyn muddo kooban socotey ku dhexmartey alabaabka hore ee »
Al-Shabaab iyo Yemen oo Ciidamo Isdhaafsadey
Weriye ka tirsan warbaahinta BBC qaybta Englishka ayaa waraysi dheer la yeeshay afhayeenka xarakada al-Shabaab Shiikh Cali Maxamed Raage, waraysiga ayuu ku sheegay afhayeenku in ay u direen ciidamo »
Israsaasayn Degmadda Xarrardheere ku dhexmartay Burcad Badeed Soomaali ah.
Kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida ee haysta Markabka laga leeyahay dalka Giriiga ayaa waxaa ay maanta isku qabsadeen lacag madaxfurasho ah,waxaana sidaas shaacisay Wakaaladda Wararka ee »
Al-Shabaab oo iska fogeysay Eedeynti Kenya.
Xarakada Mujaahidinta ee Al-Shabaab ayaa waxaa ay maanta iska fogeyeen eedeynti ay shalay Dowladda Kenya uu soo jeedisay oo ahaa in ay ka dambeysay Banaanbixi rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada »
Usama bin Laden Ma Baarlamaanka Dalka Spain Ayuu Xubin Ka Yahay?
January 16, 2010 - By: Hanad Askar
Nin Siyaasi ah una dhashey dalka Spain ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay in Booliska dalka Maraykanka ee magacooda loo soo gaabiyo FBI ay isticmaalaan sawirkiisa, si ay ugu raadiyaanka qaabka Usama »
Garoowe: Habkee Puntland Looga Hirgelinkaraa Dimoqraadiyadda
January 16, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa maanta lagu qabtay xarunta Libareeriga ee Magaalada Garoowe kulan balaaran oo ay ka soo qayb galeen xubna kala duwan oo ka socda Qaybaha kala duwan ee Bulshada iyo Dowladda. Shirka oo ahaa »
Tagged With: Good governance
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo Digniin uu diray WHO.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Puntland Dr.Bashiir Cali Biixi ayaa waxaa uu maanta digniin culus uu diray Hay'adda Qaramada Midoobay ee uu qaabilsan Caafimaadka Aduunka ee marka magaceeda »
Tagged With: Cali Cabdullaahi Warsame, Wasiirka Caafimaadka Puntland
Ciyaar Xiiso badan oo dhexmartay Naadiyada Horseed Media iyo Radio Daljir (Sawiro & Maqal)
January 16, 2010 - By: Khalid Yusuf
Ciyaar aad uu xiiso badan oo ay kasoo qaybgaleen Boqolaal dadweyne ah oo xiiseeya Isboortiga ayaa waxaa ay maanta garoonka weyn ee Kubadda Cagta ee magaalada Bosaaso ku dhexmartay Naadiyada kala ah »
Kenya:”Al-Shabaab waxaa ay ku lug lahayd Mudaharaadki ka dhacay Nairobi”.
Dowladda Wadanka Kenya ayaa waxaa ay sheegtay in Xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab ay ku lug lahayd mudaharaad rabshado watay oo shalay gelinka dambe ka dhacay magaaladda Nairobi ee caasimada dalka »
Ciidanka Badda ee Turkiga oo fashiliyey Weerar Burcad Badeed.
Ciidanka Badda ee Turkiga oo qayb ka ah howlgalka lagula dagaalamaayo Burcad Badeeda Soomaalida ayaa waxaa ay maanta oo sabti ah ka hortageen weerar ay kooxo Burcad Badeed Soomaali ah ku qaadeen »
Dad ugu Dhintey Cudurka Shuban Biyoodka Degmada Qandala (dhageyso)
Wararka ka imaanaya Degmadda Qanddala ee ka tirsan degaanada hoos taga gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegaayan in dad gaaraya 10 qof ay ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka. Gudoomiyaha degmada »
Tagged With: Qandala
Galmudug oo loo magacaabay Xildhibaano iyo Wasiiro (magacyada)
Munaasabad balaaran oo lagu qabtay hoolka shirarka hotelka Embassy ee koonfurta magaalada Galkacyo ayaa waxaa lagu magacaabay qaar ka tirsan wasiirda cusub ee maamulka Galmudug ee koonfurta »
Tagged With: Galmudug
Maraykanka oo la wareegay Airporka dalka Haiti
Ciidamada Maraykanka ayaa si rasmi ah ulla wareegay maamulida Airporka magaalada Porto-Prince ee caasimada dalka Haiti. DowladaÂ dalka Haiti ayaa si rasmi ah u saxiixday in ciidamada Maraykanka ay »
Madaxweyne Shariif oo dib ugu soo laabtay Muqdisho(Sawirro).
Madaxweynaha DFKM ah ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Madaxweynaha oo ay la socdeen wefdi balaaran oo ay ku »
Weerar lagu qaaday 3 idaacadood oo ka shaqeeya Gaalkacyo
Waxaa habeenimadii xalay weerar lagu qaaday sadex idaacadood oo ku yaal magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug. Weerarkan bambaano ayaa lala beegsaday idaacadaha kala ah Radio Gaalkacyo oo »
Tagged With: Saxaafadda
5 qof oo ku dhimatay mudaaharad ka dhacay dalka Kenya
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay mudaharaad ka dhacay maalintii shalay dalka Kenya, Booliska ayaa xabado ku furey dad mudaaharaadaayey kuwaas oo ka cabanaayey nin u dhashey dalka Jamaica oo labadii »
11 Sano Kadib Sidee Shiikh Usama bin Laden u egyahay?
Wasaaradda arimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa soo bandhigtey sawiro cusub oo ay ku sheegeen sida uu u ekaan karo Shiikh Usama bin Laden 11 sano kadib. Sawirada cusub ee ay soo bandhigtey »
Tagged With: al-Qaeda, Bin Laden
Sarkaal ka tirsan Booliska Somaliland oo caawa lagu toogtay Laascaanood
January 15, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa fiidnimada caawa (15.01.2010)Â magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu toogtay Sarkaal sare oo ka tirsan Booliska maamulkaÂ Somaliland. Sarkaalkaas ayaa lagu magacaabi jiray »
Jaamacadda Carabta oo ku baaqday in taageero Caalami la siiyo DFKM ah.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa ay ku baaqday Beesha Caalamka in ay taageero caalami ah ay u fidiso DFKM ah si ay dib uu soo celiso amaanka iyo kala dambeynta ka jiray gudaha dalka »
Daladda PUNSA oo maanta Kulan uu qabatay Ururada Bulshada Rayidka ah ee ka jira Puntland(Sawirro).
Kulankaan oo ka dhacay xarunta Library-ga ee magaalada Garoowe ee caasimada Puntland,ayaa furitaankiisa kasoo qaybgashay Wasiir Kuxigeenka Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Marwo Saynab »
Tagged With: PUNSA
Goâ€™aamo Ka Soo Baxay Kulankii Madaxweynaha Soomaaliya & Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Talyaaniga(Sawirro).
Qayb ka mid ah, booqashadii shaqo, ee uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Sharif Shiikh Axmed, ku joogey magaalada Nairobi, ayaa waxaa ka mid ahaa kulan uu maanta Madaxweynuhu la qaatay »
Soomaaliya oo loogu baaqay inay dhisato Booliska ka hortagga Argagixisada
Isagoo kula hadlaya wariyeyaasha magaalada Nairobi, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga Franco Frattini ayuu wuxuu sheegay in askar bileys military oo talyaani ay diyaar u yihiin inay »
Wald Cabdalla:”DFKM ah waxaa ay ku jirta Khatar aan caadi ahayn”.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Axmedou Wald Cabdalla ayaa sheegay in DFKM ah ay iminka khatar ugu jirto in ay burburto. Axmedou Wald Cabdalla oo »
Qorax Madoobaad oo maanta ka dhacay dalka Soomaaliya iyo Caalamka.
Maanta oo ku beegan 15-ka Bisha Janaayo ahna maalinimo jimca ah ayaa dhamaan gobolada dalka Soomaaliya si weyn looga dareemay qorax madoobaad,kaas oo subaxnimadi maanta dhacay. Inta badan gobolada »
Dad ku dhintay Shil Gaari oo ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Ugu yaraan 4-qof ayaa ku dhintay Shil gaari oo ka dhacay gobolka Waqooyi ee dalkaas Kenya. Shilka gaari ayaa yimi ka dib marki gaari waday qaar ka mid ah Ciidamada Milateriga ee Kenya oo kusi »
Cabdulqadir Nuunow oo Ka Mid Noqdey Weriyaasha VOA ee Washington
January 15, 2010 - By: Hanad Askar
Cabdulqaadir Maxamed Nuunow ayaa ku biirey bahda VOA ee ka hawlgasha xafiiska Washington, Cabdulqaadir Nuunow ayaa gaarey habeen hore (14.1.2010) cariga maraykanka, si uu halkaas uga bilaabo shaqada »